Tenga Elastic Waist Ribhoni Black Hip Hop Men's Short | WoopShop®
Elastic Waist Ribhoni Black Hip Hop Men's Short
Chinese Saizi XS
Hapana Chain / Saizi yeChinese XXXL / ChinaNeChain / Chinese Size XL / ChinaHapana Chain / Chinese Size XXL / ChinaNeChain / Chinese Size XXL / ChinaHapana Chain / Chinese Size XL / ChinaNeChain / Chinese Size M / ChinaHapana Chain / Chinese Size L / ChinaNeChain / Chinese Size L / ChinaHapana Chain / Chinese Size M / ChinaHapana Chain / Chinese Size S / ChinaHapana Chain / Chinese Size XS / ChinaNeChain / Chinese Size XXXL / ChinaNeChain / Chinese Size XS / ChinaNeChain / Chinese Size S / China
Elastic Waist Ribhoni Black Hip Hop Men's Short - No Chain / Chinese Size XXXL / China yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Kukura: Chinese Saizi
Cherechedza: Kukura kweAsia, i2-3 saizi idiki pane EU/US saizi. Kana iwe ukapfeka EU/US saizi M, unogona kusarudza saizi yedu XL kana XXL. Sekuyerwa neruoko, mutsauko we1-3cm unobvumidzwa (1cm=0.39inch). Makomputa akasiyana anogona kuratidza mavara akasiyana kunyangwe ari iwo mavara akafanana. Ndokumbira ubvumire musiyano weruvara unonzwisisika.
Iyo jira haisi yakanyanya, inotonhorera shorts, ndine hurombo nebhandi re elastic. Kureba kwangu ± 150 Kutenderera kwechiuno kunenge 90. Yakarongedzerwa kutanga kwaDecember kana kupera kwaNovember. 12 Dec yakasvika
Mido 1.73 uye saizi Xl yaive yakanaka, ndaizokurudzira kuodha saizi imwe kana maviri akakura kune ako sezvandinowanzo pfeka L uye anokodzera iwo zvakanaka. Hunhu hwePfupi hutete zvishoma asi pamutengo wayo wakanaka kwazvo. Maketani anotaridzika emhando, yakanaka kwazvo chokwadi, ndaiada. Uye pakupedzisira, yakasvika pamberi pehurongwa 10/10
akatora hukuru hukuru uye hwakarurama.
bhurukwa rinotaridzika semufananidzo, kunyangwe jira rinonzwa rakareruka uye rakachipa - rinoshanda mukuita kuti rive rakakodzera kupfeka muzhizha, zvakadaro. Saizi idiki chaizvo, ndingati zvirokwazvo tora zano rakapihwa nemumwe munhu pano rekuenda saizi mbiri pamusoro pehukuru hwako chaihwo. Kutakura kwakakurumidza zvikuru!
Mabhurugwa acho akafanana nefoto, anouya akaunyana zvishoma, ndinorayira kukumbira saizi imwe kana maviri kupfuura yako sezvo idiki. Ndakaraira XXL yehurefu 1.65cm uye 65kg. Akauya mumazuva 9